Ukuveliswa kwedijithali kunye neetekhnoloji ezintsha kuyilo lweemveliso | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukuveliswa kwedijithali kunye neetekhnoloji ezintsha ukuyila iimveliso zonke iintlobo. Iinkqubo zokuvelisa zivelise umnikelo wabadali amathuba amatsha okuvelisa iimveliso. Iitekhnoloji ezinje Ukushicilelwa kwe-3D Kuya kufuneka ufumane iinjineli, amagcisa, abayili kunye nabenzi bazo zonke iintlobo yenza izindululo zomzimba ngexesha lokurekhoda kwaye ngexabiso eliphantsi kakhulu kungafuneki ukuba uye kwishishini ukwenza iiprototypes.
Utshintsho lwehlabathi, inkqubela phambili yetekhnoloji kunye nobuchule bokujoyina le nkqubo ukubonelela ngeziphumo ezizodwa kubo bobabini abadali kunye nabasebenzisi abafuna iimveliso eziveliswe ngolu hlobo lwetekhnoloji.
1 Itekhnoloji yoshicilelo ye3D
2 Yintoni enokwenzeka ukushicilelwa kwe-3D?
3 Zeziphi izinto ezenziwayo xa kungumyili wemveliso yedijithali?
4 Ngaba imveliso yedijithali iluhlaza?
5 Amandla amanzi
6 Ukusika i-Laser
7 U-Elena Corchero: umyili okhethekileyo kubugcisa bedijithali
Itekhnoloji yoshicilelo ye3D
La Ukushicilelwa kwe-3D ukwazile ukwenza ifayile ye- inkqubo entsha yokuvelisa idijithali inomtsalane kakhulu kubuchwephesha nakumsebenzisi ofumana ngaphandle kwale teknoloji. Le nkqubo yemveliso yedijithali isebenzisa intambo yeplastiki njengezinto zokuprinta. Ngokusekwe kwi- iteknoloji yokulawula amanani, Ukushicilelwa kwe-3D kuyaphumelela Guqula idatha yamanani ukuba ihambe ukufikelela ngale ndlela kuyila iifom zomzimba kumacala amathathu.
Yintoni enokwenzeka ukushicilelwa kwe-3D?
Ukusuka kwindawo yokujonga ubuchwephesha amathuba ale nkqubo yoshicilelo ayabonakala kwimihlaba emininziukusuka mayeza phezulu ukwakhiwa siyayibona indlela amacandelo angaphandle koyilo kunye nobugcisa ayisebenzisa ngayo le nkqubo njenge isixhobo esitsha. Singafumana ukushicilelwa kwe-3D kwicandelo lamayeza kwiiprojekthi ezinomdla njenge Ukusetyenziswa kweeseli zeziqu ngokusebenzisa le nkqubo yokuprinta ekudalweni kwamalungu omntu.
Ukuba uyakuthanda ukutya, uya kuba nomdla wokwazi ukuba kukhona ukutya okwenziwe kusetyenziswa ukushicilelwa kwe3D.
Zeziphi izinto ezenziwayo xa kungumyili wemveliso yedijithali?
La imveliso yedijithaliUye wavula ilizwe elinamathuba abaqulunqi bemizi-mveliso kunye neemveliso kuba zibonelela ngokubakho yenza iiprototypes ngexabiso elifikelelekayo ukunqanda ukuya kwiinkqubo zokwenza imveliso. Ukuba ungumyili wemveliso unako Yila ifenitshala kwi-3D kwaye uyenze naphina emhlabeniOku ngokungathandabuzekiyo yinkqubela phambili kumalungiselelo, ezoqoqosho kunye nendalo, enkosi kwimveliso yedijithali uya kuba nakho ukuyifumana yonke loo fenitshala uyithandayo ngokukhawuleza nangabizi kakhulu. Namhlanje kwi-Intanethi unokufumana amaphepha amaninzi apho unganikezela khona ifanitshala yasimahla ukuba yenziwe kusetyenziswa ezi nkqubo zokuvelisa.
Ngaba imveliso yedijithali iluhlaza?
Ukuveliswa kwedijithali kuyakufezekisa oko imveliso eyilwe naphina emhlabeni kunokwenzeka ukuvelisa ngaphandle kwesidingo salo naluphi na uhlobo lothutho okanye inkcitho evela kule nkqubo. Ukuya kwinqanaba Indalo Ukuveliswa kwedijithali kube yimpumelelo. Le nkqubo intsha yemveliso yedijithaliUyaphikisana ukuphelelwa lixesha ukulwa nembono yokulahla into xa ilahleko elinye lamaqhekeza ayo. Ngomzekelo we-3D kunokwenzeka Yila nayiphi na indawo eyonakalisiweyo yento uze uyitshintshe ngaloo ndlela uyinika ubomi obutsha.
Ungayikholelwa lonto? ijethi yamanzi inganqumla kwisinyithi? Yikholwe kuba ungayenza kwaye ngokulula kakhulu. Kukho uhlobo lwe umatshini wokulawula amanani obizwa ngokuba yi "jet water" yintoni enokubakho ukunqunyulwa ukusuka kwisinyithi ukuya kumatye ngaphandle kwengxaki. Imalunga ne ubuchwepheshe obufanayo noshicilelo lwe-3D kodwa endaweni yokuba nenkqubo yokongeza izinto, inako jet enamandla yamanzi.
Sonke siyayikhumbula imeko yeemfazwe zeenkwenkwezi xa iJedi isika iminyango ngamakrele ayo e-laser ngaphandle kobunzima, nangona oku kubonakala ngathi kuyaphambana kunokwenzeka ukuba ubulele oomatshini bokusika i-laser. Olu hlobo lwetekhnoloji luyafana ne-3D kodwa isebenzisa laser ukusika zonke iintlobo zezixhobo kuxhomekeke kumandla ayo. Kwimarike sinokufumana iimveliso ezininzi ezenziwe ngale nkqubo yokusika apho eyona nto inomtsalane kukugqitywa kwayo, emaphethelweni eenkuni atshisiwe, ngaloo ndlela kufezekiswa isibheno esomeleleyo esibonakalayo.
U-Elena Corchero: umyili okhethekileyo kubugcisa bedijithali
Kwihlabathi le ezintsha kwimveliso yedijithali singafumana abayili abanomdla kakhulu abanjengo Elena Corchero umfanekiso wokubamba. Lo myili isebenzisa iinkqubo zokwenziwa kwale mihla ukwenza iimveliso zefashoni.
La Ukuzalelwa kwidijithali isibonisa a ethembisa kufutshane nekamva Apho iteknoloji, uyilo kunye nokuyila kuhamba kunye, ukulawula ukunika ilizwe uluhlu lwezinto ezinokwenzeka ezintsha zemveliso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Ukuveliswa kwedijithali kunye neetekhnoloji ezintsha ukuyila iimveliso